Indlu ye-Carnic ejwayelekile - I-Airbnb
Indlu ye-Carnic ejwayelekile
Paluzza, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Matteo
U-Matteo uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Indlu etholakala endaweni ethule. I-wifi engenzeka.
Azikho izilwane ezifuywayo endlini.
Amathuba okupaka amamitha angama-50 kude,
Izindleko zokushisisa azifakiwe enanini, zizobalwa ngokusekelwe ekusetshenzisweni kwegesi noma izinkuni.
Le ndlu ejwayelekile yeCarnic itholakala edolobhaneni lasendulo laseCasteons, ngaphansi kweColle di
I-San Daniele kuMasipala wase-Paluzza, esiFundazweni sase-Udine.
Kungamakhilomitha ayi-15 ukusuka emngceleni ne-Austria, amakhilomitha ayi-8 ukusuka e-Arta Terme spa kanye ne-8 km ukusuka emithambekeni yokushushuluza yesikhungo sezokuvakasha sasebusika saseZoncolan.
Yindlu ewubukhazikhazi kodwa ethokomele, elala ezine, enikezwe ngokwesiko laseCarnia yakudala, enesici esithi "Fogolar", elungele amaholide omndeni, noma kulabo abathanda ukuqwala izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngezinyawo nokushushuluza.
Incazelo: Ukufinyelela endlini ngezitebhisi zamatshe. Emnyango kunethala elikhulu elinabatshali bokhuni; indawo yokungena kanye nomhubhe; phansi kukhona igumbi elikhulu lekhishi negumbi lokuphumula elinefenisha ye-rustic, isitofu, isiqandisi, usinki kanye negumbi elikhethekile leFogolar.
Izitebhisi zamatshe ziholela esitezi sokuqala lapho kunendlu yokugezela, enobhavu nomshini wokuwasha,
igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokulala elinemibhede emibili eyodwa.
Ngemuva kwendlu kunwebeka indawo ewudedangendlale enezihlahla zezithelo, ongakhuphukela kuyo uye ehlathini phezulu.